Than | U.N.O.B
Author Archives: Than
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း မျိုးနွယ်စုသတင်းစာစောင် P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416 သို့ လူကြီးမင်းများခင်ဗျား ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၀ခု၊ သြဂုတ်လ (၂၄)ရက် “ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသတင်းစာစောင် ” ကို ယခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်၍ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)အဖြစ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၁။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်းကြီး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသင်းဝင်များသို့ပုံမှန်အစီရင်ခံသွားရန်။ ၂။ နီးစပ်ရာမြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ဗဟုသုတဆိုင်ရာ၊ အသိပညာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေရေး ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ၊ သိမှတ်စရာသတင်းများဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဆိုင်ရာများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်တတ်နိုင်သလောက်ဖြန့်ချီပေးသွားရန်။ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမည့် ” မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ သတင်းစာစောင် ” အတွက် အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း “စာမူ”များဆက်သွယ်ပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ UNOB အဖွဲ့ဝင်သော်၎င်း၊ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူသော်၎င်း မည်သူမဆိုပါဝင်ရေးသားနိုင်ကြပါသည်။ စာစောင်သည် Comm unity အကျိုးအတွက်သာလျှင်ဖြစ်၍ စာမူခငွေကြေးချီးမြင့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါခေါင်းစဉ်အရ၎င်း၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ၎င်း ပေးပို့နိုင်ကြပါသည်။ ဗဟုသုတ၊ ရသစာပေ၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဆောင်းပါး၊ သတင်း၊ ဟာသ စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ စာမူနှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားစာစောင်များတွင်ပေးပို့ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း တာဝန်ယူပေးရမည်ဖြစ် ပါသည်။ ဘာသာပြန်စာမူဖြစ်ပါက မူရင်းစာမူကိုပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်။ သတင်းရေးသားပေးပို့ပါက သတင်းရရှိ (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပေါ်သည့် ဇစ်မြစ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမည်။ စာမူပို့ရာတွင် ကွန်ပျူတာစာမူဖြစ်စေ၊ လက်ရေးစာမူဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ စာစောင်၏ပုံမှန်ထုတ်ဝေမှုမှာ (၃)လ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမှု အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)ကို Read More...
Picture Gallery, UNOB
ဥပဒေရေးရာဟောပြောပွဲမှ သတင်းကောင်းများ လေးစားအပ်သောUNOBအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်များ၊ Website ပရိဿတ်များခင်ဗျား – မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း၏အစီအစဉ်ဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Federal Franchise ဥပဒေ များနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေများ၊ အခြားသိသင့်သိထိုက်သောဥပဒေများကို New York အခြေစိုက်ရှေ့နေ ဦးပက်ထရစ်ဝမ် မှ အသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ဟောပြောပွဲတွင် Federal Franchise ဥပဒေအကြောင်းရှင်းပြခြင်း၊ တက်ရောက်လာသူများ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေများ၊ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအ၀ယ်(Foreclosure, Shortsales)ဥပဒေဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေ ကြားအကြံပြုသွားပါသည်။ ဟောပြောပွဲတွင်အဖွဲ့ဝင်များအကြားနွေးထွေးရင်းနှီးမှုများလဲပိုမိုရရှိခဲ့ကြပါသည်။ UNOB အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးပက်ထရစ်ဝမ် မှမြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအတွက် ဥပဒေရေးရာ ကိစ္စများတွင် များစွာအကူအညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းများပြောကြားခဲ့ပါသည်။ UNOB အဖွဲ့ဝင် များအနေဖြင့် ဥပဒေရေးရာအမှုကိစ္စများအတွက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလုပ်ဆောင်ပါက UNOB အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်ပြောကြားရန်အသိပေးလိုပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အထူးနှုံးအစီအစဉ်ဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဦး ပတ် ထ ၇စ် ဝမ်း နှင့် ဆက် သွယ် ရန်3း47-219-5337 mkpwssy.jsc@verizon.net အ ကောင်း ဆုံး အ ချိန်းbetween 10 am and6pm ဆက် သွယ် တဲ့ အ ခါ နာ မည် ရယ်၊ UNOB အ ဖွဲ့ ဝင် ဖြစ် ကြောင်း Read More...
Website ပရိဿတ်များခင်ဗျား – သြဂုတ်လ(၁)ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ဒါဏ်ငွေပေါင်း(၉)သန်းရရှိသည်အထိ အဖမ်းအဆီးများကို State Troopers လုပ်ဆောင်ကြမည်ဟုသိရပါသည်။ ကားမောင်းခရီးသွားများ ပို၍သတိထားနိုင်ရန် သတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Dear Everyone, Starting Aug 1st state troopers will write tickets for5miles over the speed limit. The goal is to get9million in 30 days. Drive safe. Read More...
Burmese Literature Discussion(PDF format) မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း ( အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ) United Nationals Organization of Burma လေးစားအပ်ပါသော UNOB အသင်းဝင်များနှင့် လူကြီးမင်းများခင်ဗျား။ ဖလော်ရီဒါရှိစာပေ၀ါသနာရှင်များအတွက် စာပေဆွေးနွေးပွဲတခုကို UNOB မှစီစဉ်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖလော်ရီဒါတွင်နေထိုင်သော စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်ပတ္တမြားခင် နှင့် မြန်မာပြည်မှအလည်ခရီးရောက်ရှိလာသော ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း နှင့် အလင်းတန်းဂျာနယ်အယ်ဒီတာချုပ် ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း တို့မှ စာပေရေးရာများ ဆွေးနွေး ဟောပြောကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်များ၊ အားလုံးသောစာပေ၀ါသနာရှင်များ ကြွရောက်အားပေး ကြပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပရိဿတ်များမှ စာပေရေးရာမေးခွန်းများကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ကြပါသည်။ အစီအစဉ် နေ့ရက်။ ။ သြဂုတ်လ (၁၄)ရက် (စနေနေ့) 8/14/10 အချိန်။ ။ ညနေ(၈)နာရီ မှ ည(၁၁)နာရီအထိ နေရာ။ ။ ဒေါက်တာဦးကြင်ဟို + ဒေါ်ဂရေ့စ် နေအိမ် Address: 427 NW 38 Way, Deerfield Beach, FL-33442 954-849-2016 begin_of_the_skype_highlighting 954-849-2016 end_of_the_skype_highlighting ( ကြွရောက်လာကြသောပရိဿတ်များကို စုပေါင်းညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည် ) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း Read More...
စာပေဟောပြောပွဲ မလုပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍တောင်းပန်ခြင်း
လေးစားအပ်ပါသော UNOB အသင်းဝင်များ၊ Website ပရိဿတ်များ၊ စာပေ၀ါသနာရှင်များခင်ဗျား။ UNOB Website ပေါ်တွင် ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေ၏စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်မည်ဟု ကျေညာခဲ့ပါသည်။ ထိုကျေညာချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ရခြင်းအပေါ် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ တစ်ချိန်သောကာလတွင် အကောင်အထည်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ UNOB မှတတ်နိုင်သမျှသော ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ဆက်လက်အားပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ UNOB Read More...
JAY F LEONG (ခေါ်) ကိုဝင်းဆွေ အသက် (၅၃) နှစ် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ Pompano Beach နေ SUSAN LEONG ၏ ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်း၊ Deerfield Beach နေ ဒေါက်တာဦးကြင်ဟိုး နှင့် ဒေါ်Grace တို့၏တူ၊ Delaware ပြည် နယ် Newark မြို့နေ မLily + Mr. Terence၊ Texas ပြည်နယ် Austinမြို့နေ Mr. Jim တို့၏ ချစ်လှစွာသောအကိုသည် ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၉)ရက် နံနက်(၆)နာရီ (၄၀)မိနစ် အချိန်တွင် ဖလော်ရီဒါနေအိမ်၌ ဘ၀တပါးသို့ကူးပြောင်းကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟအပေါင်းတို့အား အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်သူ ကိုဝင်းဆွေသည်အချက်အပြုတ်အလွန်ကျွမ်းကျင်သော စားဖိုမှူးတဦးဖြစ်ခဲ့ ပြီး ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိမြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း(UNOB) ၏အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ နာရေးအခမ်းအနားအစီအစဉ် နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၂)ရက် အင်္ဂါနေ့။ အချိန်။ ။ ညနေ(၅)နာရီ နေရာ။ ။ Forest Lawn North Funeral Home & Cemetery, 200 West Copans Road, Pompano Beach, FL 33064. Tel: 954-784-4000 Direction: http://maps.google.com/maps?q=200+w+copans+rd+pompano+beach,+fl+33064&oi=gmail ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများက အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူမိတ်သင်္ဂဟ များအား Read More...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ခရီးသွားများ VISA ဥပဒေ စည်းမျဉ်းများ သိလိုပါက အောက်ပါဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်နိုင်ကြပါသည်။ Myanmar-Visa.pdf Read More...
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသတင်းစာစောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416 သို့ လူကြီးမင်းခင်ဗျား ရက်စွဲ။	။ ၂၀၁၀ခု၊ မေ (၁၁)ရက် “ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသတင်းစာစောင် ” ကို ယခုနှစ်မှစတင်၍ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်းကြီး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသင်းဝင်များသို့ပုံမှန်အစီရင်ခံသွားရန်။ ၂။ နီးစပ်ရာမြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ဗဟုသုတဆိုင်ရာ၊ အသိပညာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေရေး ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ၊ သိမှတ်စရာသတင်းများဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဆိုင်ရာများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်တတ်နိုင်သလောက်ဖြန့်ချီပေးသွားရန်။ UNOB မှ ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေမည့် ” မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ သတင်းစာစောင် ” အတွက် အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း (more…) Read More...
Letter From A Friend (2)
တစ်ခါက သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး ၂ယောက် ရှိကြပါတယ်.. သူတို့၂ယောက်ချစ်နေတဲ့ အကြောင်းကို ကောင်မလေးရဲ့ အဖေက သိသွားတော့ ကောင်လေးနဲ့ လုံးဝကို သဘောမတူပါဘူးတဲ့… ဒါနဲ့ဘဲ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ ၂ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲ မခွဲနိုင်မခွာရက် သိပ်ချစ်နေ ကြတော့ အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးကြပြီး ၂ယောက်တည်းကမ္ဘာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တည်ဆောက်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်.. သူတို့၂ယောက် ထွက်ပြေးသွားတော့ ကောင်မလေးအဖေက (more…) Read More...
တရုတ်ရိုးရာအပ်စိုက်ဆေးကုသမှုကို နှစ်ချိုက်သူများအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဝေဒနာများကိုပြောပြနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာကျောင်းသူတဦး(မစုစန္ဒီအောင်)ကိုယ်တိုင် အပ်စိုက်ကုသပေးမှုကိုခံယူနိုင်ကြပါပြီ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဆေးကုသမှုအချိန်ဇယား၊ (more…) Read More...